Carrie Lam kwere nkwa ịkwado ọnọdụ Hong Kong dị ka ebe ụgbọelu na-arụ, na ebe a na-arụ ọrụ lọjistik
Chief Executive nke China Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) Carrie Lam kwuru na Mọnde na gọọmentị HKSAR kpebisiri ike ịnọgide na-enwe ọnọdụ Hong Kong dị ka ebe ụgbọelu ụgbọelu mba ụwa, ebe ụgbọ mmiri mba ụwa na mpaghara mpaghara na-arụ ọrụ. Lam mere ihe fọdụrụ ...
Airlinesgbọ elu America gbasaa ndị ọrụ 25,000 na Ọktọba
Airlineslọ ọrụ ụgbọ elu America iji gbasaa ndị ọrụ 25,000 na October American ụgbọ elu ga-enye ndị ọrụ 25,000 ọkwa na ha chere ihu na furloughs na Ọkt. 1, ndị isi abụọ kwuru na ndetu nye ndị ọrụ Wednesday. Nkwado gọọmentị etiti maka ụlọ ọrụ ụgbọ elu, nke a ga-ebuli na Ọkt. 1, ...
Gịnị bụ 3pl na otu esi emezu iwu?
Ma ị bụ onye nwe e-commerce & onye nwe azụmaahịa na-azụ ahịa, mgbe ị kpebiri ịmalite, ịtụ ahịa bụ akụkụ dị mkpa nke azụmahịa gị. Ka ọrụ gị na-aga n’ihu, ọ ga - esiri gị ike iji nwayọọ nwayọọ rụọ ọrụ nke iji mezuo iwu n’ime ụlọ ma ịchọrọ iwepụtakwu oge oge ...